कठिन मोडमा ठाकुर–महतो : नयाँ पार्टी खोल्ने कि यादवसंगै भिड्ने ? (भिडियोसहित) « Yoho Khabar
कठिन मोडमा ठाकुर–महतो : नयाँ पार्टी खोल्ने कि यादवसंगै भिड्ने ? (भिडियोसहित)
काठमाडौँ – जसपाका अध्यक्षउपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहितका नेताहरुलाई पदबाट हटाएपछि ठाकुर पक्ष थप संकटमा परेको छ । फरक पार्टी बनाएर जाने कि जसपामै अन्तरसंघर्ष गर्ने भन्ने दोधारमा यो पक्ष रुमलिएको छ ।
घरको न घाटको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर यतिबेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट निकालिएको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई हेर्दा थाहा हुन्छ ।किनकि बहुमत गुमाएर पार्टी नै गुमाएका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई सोमबार उपेन्द्र यादव पक्षलेवैधानिक रुपमै जसपाको अध्यक्षबाट हटाएको छ ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिमार्फत साउन १२ मा गरेको निर्णयलाई सोमबार निर्वाचन आयोगले मान्यता प्रदान गरेपछि ठाकुरसहित उनको पक्षमा रहेका केन्द्रीय कार्यकारणी समितिका १६ सदस्यकै पार्टीगत हैसियत गुमेको छ ।
यो संगै आयोगको अभिलेखिकरणमा अब अध्यक्ष ठाकुरसहितका सबै केन्द्रीय सदस्यको हैसियत साधारण सदस्यमा सीमित बनेको छ । अब ठाकुर महतो पक्षका अघि छुट्टै पार्टी दर्ता गर्ने वा अन्तरसघंर्ष गरेर जसपामै रहने भन्ने दुई कठिन विकल्प बाँकी छन् । तर जसपाको विवाद यतिमै सकिएको छैन । आयोगको निर्णयविरुद्ध ठाकुर महतो पक्ष अदालत गएको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले फैसलाकै आश पर्नुबाहेकको विकल्प नरहेको नेताहरु बताउँछन् ।
जसपाका तत्कालीन वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहितका केही नेताहरूले नयाँ दल दर्ता गर्न ठाकुरलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर नयाँ दल दर्ता गर्दा केन्द्रदेखि स्थनीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिको पद गुम्ने भएकाले आगामी निर्वाचनसम्मका लागि जसपामै अन्तरसंघर्ष गरेर बस्नुपर्ने मत बलियो छ । तर जसपाको ठाकुर महतो पक्षलाई पनि आयोगले जसपाको एक धारका रुपमा मान्यता दिएकाले पद नजाने अधिवक्ता तथा मधेश मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।
२०७७ वैशाख १० मा तत्कालीन समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरण भई जसपा बनेको थियो । एकिकरणको प्रक्रिया पूरा नहुँदै पार्टीमा चरम विवाद बढेर आधिकारिकता खोजिएपछि आयोगले जसपा दर्ता गर्दा कायम रहेको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमध्ये ३४ सदस्य रहेको यादव पक्षलाई मान्यता दिने निर्णय सुनाएको थियो ।
यद्यपी जसपा विभाजनलाई सत्ताभोगसंग जोडेर पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ । सत्ताको न्यानो ताप्नजुन हदसम्म पनि गिर्न तयार हुने प्रवृतिकै कारण टुटफुटको श्रृखंला चल्ने गरेको विश्लेषकहरु दाबी गर्छन ।
जसपा विभाजन ठाकुर महतो पक्ष तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा सामेल भएदेखि नै उत्कर्षमा पुगेको थियो ।सत्ता बहिर्गमनसंगै यो पक्ष काम न काजको बनेको छ भने सरकार परिवर्तनमा देउवालाई सघाउँदै आएको यादव पक्ष अब सरकारमा सामेल हुँदैछ ।
यादव पक्षले ठाकुर पक्षलाई पूर्णतः बाइपास गरेर पार्टी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ । ठाकुर पक्षले पनि मधेश फर्किएर आफ्ना गतिविधिले बढवा दिइरहेको छ । यसर्थ यी दुई समुह एकभएर जाने सम्भावना त छैनन नै, ठाकुर पक्षले तत्कालै फरक पार्टी बनाएर जाने अवस्था पनि देखिदैन ।